Saameeyayaasha Bulshada | Martech Zone
Khamiis, Maarso 28, 2013 Douglas Karr
Waxaan u maleynayaa in suuqleyda badani ay eegaan saameynta bulshada sida haddii ay tahay nooc ka mid ah ifafaalaha cusub. Ma aaminsani inay tahay. Maalmihii ugu horreeyay ee telefishanka, waxaan u adeegsan jirnay weriyaha ama jilaaga in aannu agabyada u dhigno dhagaystayaasha. Saddexda shabakadood ayaa iska lahaa dhagaystayaasha waxaana jiray kalsooni iyo awood la aasaasay… marka warshadaha xayeysiinta ganacsiga ayaa dhashay.
In kasta oo baraha bulshadu ay bixiso laba wadiiqadood oo isgaadhsiin ah, haddana saamaynta warbaahinta bulshada ayaa weli inta badan saamayn ku leh hal dhinac. Waxay leeyihiin dhagaystayaasha, in kasta oo ay aad uga yar yihiin una nugul yihiin warshadaha ama mawduuca gacanta ku haya. Ganacsatada, dhibaatadu waa isku mid inkastoo. Suuqgeyuhu wuxuu doonayaa inuu gaaro suuq saamayntiisuna saamayn ayay ku yeelataa oo way iska lahaataa suuqaas. Markaa sida shirkadaha ay u iibsadeen xayeysiistayaasha oo ay u lahaayeen afhayeenno iyaga u dhigaya, waxaan sidoo kale ku sameyn karnaa saamileyaasha bulshada.
Infograafigani ka yimid MBA ee Suuqgeynta ka hadlayaa sida qofku u heli karo ugana faa'iideysan karo saamaynta bulshada. Ma hubo inaan ku raacsanahay ereyga Saameeyayaasha Mega gudaha infographic-ka, in kastoo. Waxaan jeclaan lahaa, halkii aan u wici lahaa kuwaas saamaynta bulshada ee warbaahinta bulshada. Weli waxaa jira mowduucyo gaar ah oo aan ku aaminsanahay masuuliyiintaas on laakiin dhammaantood maahan. Waxaan ku kalsoonaanayaa Gary Vaynerchuk khamriga iyo ganacsiga, Scott gawaarida, iyo Mari ee Suuqgeynta Facebook… laakiin ma aaminsani inay i abaabulayaan kaydkayga!
Tags: Ann Handleybrian solisChris Brogangary vaynerchukGuy Kawasakiinfographicliz straussMari SmithRobert scobleSkott montyseth godinsaameeyayaasha bulshada
Sida Loo Dhexgalo Istaraatiijiyadda Mawduucaaga & Ololayaasha Warbaahinta Bulshada